होली प्रारम्भसँगै महोत्तरीको यात्रा पूरा – Himalaya Television
२०७७ चैत ८ गते ९:५१
८ चैत २०७७ महोत्तरी । सबैका हातहातमा अबिरको झोली, सबैका अनुहारमा अबिरको रातो चमक । सबै होली गीतमा मस्त हुँदै अघिल्लो यात्रामा निस्कँदै । मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका–९ कञ्चनवनबाट अघि बढ्दा यात्री रङ, अबिरको खेलसँगै बढ्दैछन् ।
यात्रीले शनिबार कञ्चनवनमा मिथिलाविहारी (श्रीराम) र किशोरीजी (सीताजी) का प्रतिमालाई रङ, अबिर अर्पण गरेर होली प्रारम्भ गरेपछि अबका यात्रामा होली गीत गाउँदै अघि बढेका हुन् । आठौँ दिन कञ्चनवनमा होली प्रारम्भ गरेर रात्रिबास गरेसँगै महोत्तरीको यात्रा पनि पूरा भएको छ ।
“किनकाके हात कनक पिचकारी : किनका हातमे अबिर झोली ? सीयाजीके हात कनक पिचकारी, रामजीके हात अबिर झोली ! हो…खेलैय होरी…!! रामसीया कञ्चनवनमें ।” शनिबार मध्याह्न होली प्रारम्भ गरिएसँगै सबै यात्री यस्तै होली गीतमा मग्न थिए । कञ्चनवनमा अघि त्रेतायुगमा मिथिला विहारमा निस्केका रामसीताले फागुन शुक्ल सप्तमीका दिन रङ, अबिर खेलेका सम्झनामा परिक्रमा यात्रीले त्यसको सम्झना गर्दै होली पर्व शुरु गरेका हुन् । अबको बाँकी यात्राका लागि सीताराम नाम सङ्कीर्तनसँगै होली गीत गाउँदै यात्री अघि बढेका छन् ।
महोत्तरीको अन्तिम विश्रामस्थल कञ्चनवनको विशेष पक्ष नै होलीको प्रारम्भ हो । चौथो दिन मटिहानी प्रवेशसँगै शुरु भएको महोत्तरी यात्रा आठौँ दिन कञ्चनवनको विश्रामबाट पूरा गरेर यात्री आज धनुषातर्फ प्रस्थान गरेका छन् । यसअघि महोत्तरीकै मटिहानी, जलेश्वर, मडै र ध्रुवकुण्डमा क्रमशः चौथो, पाँचाँै, छैटौँ र सातौँ दिनको रात्रिबास सम्पन्न भइसकेको छ । महोत्तरीको कञ्चनवन होली प्रारम्भको मिथिला परम्पराले विशेष बनेको मैथिल (मिथिलाका बासिन्दा) बताउँछन् ।
मिथिलामा माघ शुक्ल पञ्चमीदेखि नै वसन्त ऋतु शुरु हुने विश्वास गरिन्छ । यसै विश्वासमा माघ शुक्ल पञ्चमीदेखि फागुन पूर्णिमासम्म घरमा विवाह÷व्रतबन्ध र अन्य शुभकार्य हुँदा होस् वा सम्धी, भिनाजु घरमा पाहुना आउँदा होस्, हाँसख्यालमै रङ अबिर लगाइदिने गरिन्छ । यद्यपि होलीपर्वको विधिवत् प्रारम्भचाहिँ माध्यमिकी परिक्रमा कञ्चनवन आएर रामसीतालाई अबिर अर्पण गरेपछि नै मानिने गरिएको भङ्गाहा–९ कञ्चनवनका बासिन्दा ७० वर्षीय राजवीर यादव बताउनुहुन्छ ।
फागुन शुक्ल सप्तमी अर्थात् माध्यमिकी परिक्रमाको आठौँ दिन यात्री कञ्चनवन पुगेपछि न्वाइध्वाइ गरेर मध्याह्नकालमा रामसीताका प्रतिमालाई अबिर अर्पण गर्दै एकापसमा रङ, अबिर दलेर होली (फागु) खेलिन्छ । कञ्चनवनको यो होलीसँगै मिथिलामा पर्वको रौनक शुरु हुने र फागुन पूर्णिमाको भोलिपल्ट समापन हुने परम्परा छ । कञ्चनवनमा होली गीतसँगै रामसीता विवाह र उहाँहरुको वनविहार कथा प्रसङ्ग भावका मङ्गल गीत जताततै गुञ्जिन थाल्दछन् । यसरी गाइने गीतमा माध्यमिकी परिक्रमाका सबै रात्रि विश्रामस्थलका धार्मिक र पौराणिक महत्वसँगै रामसीताको जोडी निस्कँदा बस्तीबस्तीमा छाएको खुशी व्यक्त भएको हुन्छ ।
मिथिला अतिथि सत्कार र तत्वज्ञानका लागि प्रसिद्ध रहेको यहाँका बुद्धिजीवी बताउँछन् । माध्यमिकी परिक्रमाको क्रममा यात्रामा आफन्त, कुटुम्वजन छन् भन्ने थाहा भएपछि आफ्नो घर नजिक पर्ने विश्रामस्थलमा उनीहरुका लागि मिष्ठान्न विशेष परिकार बनाएर पुर्याउने आम प्रचलन छ । यसैअनुसार कञ्चनवनमा पनि यात्रामा रहेका आफन्त भेट्न विभिन्न परिकारसहित शनिबार कञ्चनवन वरिपरिका बासिन्दा पुगेका थिए । कञ्चनवनमा हुने यो भेटघाटमा सबै एकापसमा गला मिलाउँदै रङ, अबिर खेलेर रमाइलो गर्ने आफ्नो ठाउँको विशिष्ट पक्ष भएको भङ्गाहा–९ हरिनमरीका बासिन्दा ९० वर्षीय जितन यादव बताउनुहुन्छ ।
आफ्नो गौरवमय परम्परामा मैथिल गर्व गर्दछन् । “मिथिला ब्रह्मज्ञानी तत्वविद् र कर्मनिष्ठ राजा जनकको कर्मभूमि हो, गार्गी, मैत्रेयीजस्ता विदुषी र अष्टावक्र र याज्ञवल्क्यजस्ता विद्वान ऋषिमुनिले यहाँ ज्ञान आर्जन गरेर विश्वलाई तत्वज्ञान दिएका हाम्रो पौराणिक गाथा छ”, मिथिला परम्परा र संस्कृतिबारे अभिरुचि राख्नुहुने महोत्तरीकै बलवा नगरपालिका–१० का बासिन्दा कामेश्वर झा भन्नुहुन्छ, “सीताजस्ती आदर्श नारी मिथिलाकी छोरी हुन्, मिथिलाका प्रत्येक ठाउँमा मर्यादा पुरुष श्रीराम र सीताका पैताला परेका छन्, यो परिचय हाम्रो विशिष्ट हो ।” कञ्चनवनमा प्रारम्भ हुने होलीपर्वले आपसी सद्भाव, मित्रता र विश्ववन्धुत्वको सन्देशसँगै इष्र्या र अहङ्कार त्याग्न प्रेरणा दिने झाको थप भनाइ छ ।
माध्यमिकी परिक्रमाका सबै रात्रिविश्रामस्थलले विशिष्ट परिचय ओगटेका छन् । यसमध्ये कञ्चनवनमा रामसीताले अबिर खेलेर विहार गरेका रामायणकालीन कथा प्रसङ्गले यहाँको माटो र परिवेश अझ उन्नत रहेको पुष्टि हुने भङ्गाहाका नगरप्रमुख सञ्जीवकुमार साह बताउनुहुन्छ । “अबिर, रङ प्रफुल्लताका प्रतीक हुन्”, साहले भन्नुभयो, “रामसीता मिथिला विहार गर्ने क्रममा यहीँ आएर प्रफुल्ल हुनुभएछ, हामी धन्य छौँ ।” रामायणकालीन यो गाथाको पहिचान जीवन्त राख्न र कञ्चनवनको परिचय अझ बढी मुखरित गर्न नगर कार्यपालिकाले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको साहको भनाइ छ । कञ्चनवनलाई धार्मिक पर्यटनको मुख्य केन्द्रका रूपमा विकास गर्न प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारको समेत साथ चाहिएको साहले बताउनुभयो ।
महोत्तरी यात्रा होली